Ikhwalithi Ephakeme Yegolide Ye-Refractory Annealing Crucible-XTL
Ukukhiqizwa okuyinhloko kwe-fire assay crucible, i-Graphite crucible, i-Silicon carbide crucible.Futhi yamukela i-OEM ne-ODM.
I-Fire Assay Crucible
I-Refractory Ceramic Sagger
I-Alumina Ceramic Tube/pipe/rod/roller
I-Alumina Ceramic Crucible
I-Alumina Ceramic Substrate/ipuleti
I-Boron Nitride Ceramic
Ingxenye ye-Bn Ceramic
I-Silicon Carbide Crucible
Ikhaya > Imikhiqizo > I-Fire Assay Crucible > I-Clay Crucible
Ikhwalithi ephezulu yekhwalithi ephezulu yekhwalithi ephezulu yobumba beCeramic Fire Assay Abakhiqizi abaCrucible beNkampani yokuncibilikisa igolide - XTL
Ikhwalithi Yase-China I-Fire Assay Ukukhiqiza Okuphambanayo Nefekthri I-Magnesia Cupel Yomkhiqizi Oncibilikisa Igolide | I-XTL
Isitsha esihle kakhulu se-silica encibilikisa i-silica encibilikayo, isitsha se-quartz esincibilikisa iClay Crucible Manufacturers yegolide neplatinamu - XTL
I-High Temperature Resistant Lab Fire Assay Clay Crucible for Melting Gold
I-porcelain yamakhemikhali ibizwa nangokuthi i-porcelain engokwenyama namakhemikhali noma i-ceramics ekhethekile. Ingxenye eyinhloko yi-alumina engu-45% kanti enye i-silicon dioxide. Iwuhlobo lwe-porcelain eqinile. Inokumelana okuhle kakhulu kwamakhemikhali kanye nokumelana nokushaqeka okushisayo, kanye namandla aphezulu emishini. Isetshenziswa kabanzi embonini yamakhemikhali, embonini yezemithi kanye nelebhu yamakhemikhali.
1. Ingenziwa ibe yizinhlobonhlobo zezimo eziyinkimbinkimbi, ukunemba kobukhulu obuphezulu.
2. Xhumana nelangabi ngokuqondile, akukho phunga namagesi aguquguqukayo emazingeni okushisa aphezulu
3. Amandla aphezulu emishini, ukumelana nokugeleza kwegesi.
4. I-shrinkage ephansi, i-conductivity ephansi yokushisa.
5. Amandla amahle kakhulu ekushiseni okuphezulu nokuzinza kokushisa.
Isicelo kanye nokusetshenziswa:
I-porcelain crucible ingaba ngu-1050 ℃, isetshenziselwa kabanzi ekusetshenzisweni kokushisa okuphezulu:
1. Metal Processing
2. Ukuncibilika Kwengilazi
3. Rapid Thermal Cycling
4. Gemstone Ukuhlanzwa for Jewelry Industry
5. Ilabhorethri kanye nemishini yokuhlola
6. Ukuhlaziywa kokushisa
I-porcelain crucible isetshenziswa kakhulu endaweni egqwala kakhulu futhi enezinga lokushisa eliphezulu njengamandla okushisa. Ezinye izinhlobo nokwakheka nakho kungenziwa ngendlela oyifisayo ngokuya ngemidwebo yekhasimende, ubukhulu kanye nemfuneko yokusebenza.
Izinga lokushisa lokusebenza:
Ikesi lezinkuni, ama-pallets, njll.
50,000 izingcezu ngenyanga
Isampula yamahhala, sicela unakekele ukuthunyelwa
Ukuhlaziywa Kwensimbi Eyigugu
Intengo:Imikhiqizo yethu iqhathaniswa kahle nabanye abathengisi.
Ikhwalithi:Siphumelele i-IS0 9001:2005. ejwayelekile, uzinzile, uthembekile
Izisetshenziswa:Sinomugqa ophelele wokukhiqiza kanye nemishini yokuhlola, kufaka phakathi umugqa wokukhiqiza othomathikhi.
Umlando:Siyinkampani ehlanganiswe no-R&D, ukukhiqizwa nokuthengisa ngokuphelele,
* Umkhiqizi ochwepheshe kusukela ngo-1997.
* Ukulawulwa kwekhwalithi okuqinile kunqubo yokukhiqiza nokubekezelelana.
* Amasampula wamahhala ayatholakala
* Ukukhiqizwa okwenziwe ngokwezifiso okususelwa kumdwebo wakho noma imininingwane yakho
* Ukulethwa ngesikhathi kanye nokwesekwa okuthembekile kanye nenkonzo
* I-Inventory iyatholakala ukuze ithunyelwe ngokushesha
* Sigcina imfihlo yayo yonke imidwebo nolwazi lwebhizinisi phakathi kwethu.
Ingabe uyinkampani yokuhweba noma umkhiqizi?
Ungakwazi ukunikeza amasampula mahhala?
* Yebo, singanikeza isampula yamahhala uma sinayo esitokweni, kodwa imali ye-courier izoqoqwa.
Ingabe uyawamukela ukukhiqizwa okwenziwe ngendlela oyifisayo ngokusekelwe ekucacisweni kwethu?
* Yebo, sinikeza isevisi ye-OEM ne-ODM. Vele usithumelele umdwebo wakho uma unawo. Uma ungenawo umdwebo, vele usitshele umbono wakho, sizokwenzela umdwebo.
Sinini isikhathi sokulethwa?
* Izinsuku zokusebenza eziyi-7 zemikhiqizo ejwayelekile izinsuku ezingama-30 zemikhiqizo eyenziwe ngokwezifiso.
Uma uneminye imibuzo, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
I-Liling Xing Tai Long Special Ceramic Co., Ltd
Othintana naye: Fanny
Ucingo: +86 13975373343
Ikheli lenkampani: Shentan Industrial Zone, Liling, Hunan, 412200
I-Refractory Crucible I-Gold Annealing Crucible
Thatha ithuba lolwazi lwethu nolwazi olungenakuqhathaniswa, sikunikeza isevisi engcono kakhulu yokwenza ngokwezifiso.
Into yokuqala esiyenzayo ukuhlangana namakhasimende ethu futhi sixoxe ngezinjongo zawo kuphrojekthi yesikhathi esizayo.
Kulo mhlangano, zizwe ukhululekile ukuveza imibono yakho futhi ubuze imibuzo eminingi.
Wonke akhiqizwa ngokuvumelana nezindinganiso zamazwe ngamazwe eziqinile. Imikhiqizo yethu ithole umusa kuzo zombili izimakethe zasekhaya nezangaphandle.
Manje sebethumela kakhulu emazweni angama-200.
Ikhwalithi ephezulu yekhwalithi ye-Ceramic clay Fire Assay Abakhiqizi be-Crucible bokuncibilikisa igolide uma kuqhathaniswa nemikhiqizo efanayo emakethe, inezinzuzo ezivelele ezingenakuqhathaniswa ngokusebenza, ikhwalithi, ukubukeka, njll, futhi ijabulela idumela elihle emakethe. I-Xingtailong ifingqa iziphambeko zemikhiqizo edlule futhi iqhubeka ithuthukisa. Imininingwane yekhwalithi ephezulu ye-Ceramic clay Fire Assay Abakhiqizi beCrucible bokuncibilikisa igolide bangenziwa ngokwezifiso ngokuya ngezidingo zakho.I-Fire Assay Crucibles inokumelana okuphakeme kunokuvamile kokuqhekeka ngaphansi kwezimo zokuhlola umlilo. Ama-crucibles ethu asetshenziswa kulabhorethri kuyo yonke indawo yemakethe yamazwe ngamazwe. Sinezinhlobonhlobo zomumo nosayizi abatholakalayo ukuze babhekane nezicaciso ezidingekayo.Ama-crucibles ethu anikeza impilo ende, ukuncibilika okusheshayo, isivinini esingapheli sokuncibilika, nokumelana okukhethekile nezinguquko ezinodlame zezinga lokushisa.
6A 7A 8A China Fire Assay Crucible Manufacture And Factory Magnesia Cupel for Melting Gold uma kuqhathaniswa nemikhiqizo efanayo emakethe, inezinzuzo ezivelele ezingenakuqhathaniswa ngokusebenza, ikhwalithi, ukubukeka, njll., futhi ijabulela idumela elihle emakethe. I-Xngtailong ifingqa iziphambeko zemikhiqizo edlule futhi iqhubeka ikuthuthukisa. Imininingwane ye-6A 7A 8A China Fire Assay Crucible Manufacture And Factory Magnesia Cupel for Melting Gold ingenziwa ngendlela oyifisayo ngokwezidingo zakho.I-Cupel i-refractory enezimbotshana yokumunca i-lead oxide lapho umlotha uphephetha ibhande lomthofu. Ingxenye eyinhloko ye-magnesia i-magnesium oxide, eyi-refractory enhle kakhulu futhi engakwazi ukumelana nokuguguleka kwe-alkaline flux. I-lead oxide iyi-alkaline flux enamandla kakhulu. Emazingeni okushisa aphezulu, ukuhlobana phakathi kwe-lead oxide ne-silica kunamandla kakhulu, okungahlasela i-silicate ku-cupel. Kukhona i-silicate eyengeziwe ku-ash cupel kanye ne-cement cupel. Ngemuva kokuvunguza ngalolu hlobo lwe-cupel, kuzoba nemigodi ebusweni bekhabethe, futhi izinsimbi eziyigugu zizolahleka ngenxa yalokho. Ukusebenzisa i-magnesia cupel, ayikho into enjalo ngemva kokufutha komlotha, ingaphezulu libushelelezi kakhulu.
I-quartz yekhwalithi ekhethiwe njengezinto zokwakha, ezihlanganiswe nomsebenzi othuthukisiwe we-ceramic processing, ikakhulukazi esetshenziselwa ukuncibilikisa i-platinum, igolide, isiliva, ithusi kanye ne-alloy yokushisa okuphezulu, ukuhlanzeka okuphezulu, i-anti-corrosion, i-asidi eqinile ne-alkali eqinile, ukuqina okuhle, ukushaqeka okuphezulu okushisayo. ukumelana. Ingxenye eyinhloko i-SiO2 ≥80%, Al2O3 (≤17%) kanti enye ingu-3%( K2O, Na2O, Fe2O3), Akukho mfantu ngemva kokushisa okungazelelwe izikhathi ezingu-10 nokubanda okungazelelwe ku-1100℃⇌ 20℃, futhi akukho ufa. ngemuva kwezikhathi eziyi-10 usebenzisa isibhamu sokusika umoya-mpilo ukufafaza ilangabi elingu-1700-1800 ku-crucible.Isitsha se-silica esincibilikayo esihlanganisiwe, i-quartz encibilika i-Clay Crucible Manufacturers indishi yegolide neplatinamu uma iqhathaniswa nemikhiqizo efanayo emakethe, inezinzuzo ezivelele ezingenakuqhathaniswa ngokusebenza, ikhwalithi, ukubukeka, njll., futhi ijabulela idumela elihle emakethe. I-Xngtailong ifingqa iziphambeko zemikhiqizo edlule futhi iqhubeka ikuthuthukisa. Imininingwane ye-Fused silica melting crucible, i-quartz encibilikisa isitsha segolide segolide neplatinamu ingenziwa ngendlela oyifisayo ngokuya ngezidingo zakho.
Iziphambano zethu zokuhlola umlilo zinikeza ukuphila okude, ukuncibilika ngokushesha, isivinini esingapheli sokuncibilika kanye nokumelana okukhethekile nezinguquko ezinobudlova zezinga lokushisa.
5g/20g/30g/40g/50g/55g/65g/75g labhorethri yobumba yobumba crucible Fire assay crucible
5g/20g/30g/40g/50g/55g/65g/75g High Temperature Resistant Lab Fire Assay crucible for sample elincibilikisa igolide.High refractoriness, akukho slag, akukho ukungena, akukho ukuqhekeka.
izinga eliphezulu lokuncibilika kwegolide kokuhlolwa komlilo kumalabhorethri okuhlola ezentengiselwano
I-Fire Assay Usayizi Obethelekayo: 5g/20g//30g/40g/45g/50g/55g/65g/75g kanye No.8/No.8.5/9/No.9G/No.9.5 crucible are avavalbe futhi futhi senza customzied usayizi. Amasampula wamahhala ayatholakala ukuze ahlolwe
I-Ceramic Clay Fire Assay Crucible For Lab Igolide Ukuncibilika kanye Nokuhlaziywa Kwensimbi Eyigugu
Izinsimbi ezitholwe ekuhlolweni komlilo ezivivinyayo ziyizinsimbi eziphuma ekuhlanganisweni kwezinto esithandweni sokuhlola, ukuze kutholakale igolide, ngokuvamile emazingeni okushisa acishe abe ngu-2,000 Degrees F. Indlela Yokuhlola I-Fire Assay inamakhulu eminyaka ubudala, kodwa isengenye yeziningi kakhulu izindlela ezinokwethenjelwa zokwenza izivivinyo (ukunquma okuqukethwe kwensimbi kwensimbi) yensimbi equkethe izinsimbi eziyigugu (ezihloniphekile) - Igolide, iSiliva nePlatinum.
I-55g fire assay crucible yokuncibilika-XTL
Lezi zinhlayiya zokuhlola umlilo zihlinzeka ngokuguguleka nokumelana nokuqhekeka ngaphansi kwezimo zokusebenza ezinzima (kufika ku-1300ºC). I-Universal Fire Assay Crucibles inikeza impilo ende, ukuhlanganisa okusheshayo, isivinini sokuncibilika esingashintshi kanye nokumelana nokushaqeka kwe-thermal.Izinto zokwakha wubumba oluvutha umlilo lwekhwalithi ephezulu olunokuqukethwe kwe-alumina ephezulu okubenza bamelane nokuhlasela kwe-litharge.
Sizibophezele ekukhiqizeni imikhiqizo yekhwalithi engcono kakhulu ngamanani ancintisana kakhulu. Ngakho-ke, simema ngobuqotho zonke izinkampani ezinentshisekelo ukuthi zixhumane nathi ukuze uthole ulwazi olwengeziwe.
OKUNGCONO UKUTHINTA IBHIZINISI ELINGCONO
Ulimi Imephu yesayithi
Copyright © 2022 Liling xing tai long special ceramic co.,ltd Wonke Amalungelo Agodliwe.